Thalys နှင့်အတူဥရောပခုနှစ်တွင်ခရီးသွားလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > Thalys နှင့်အတူဥရောပခုနှစ်တွင်ခရီးသွားလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို
ခရီးသွား ဥရောပကအိပ်မက်တစ်ခုပါ ဤမျှလောက်များစွာသောလူများအတွက်စစ်မှန်တဲ့လာ. တဖန်သင်တို့ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့လုံလောကျကံကောင်းနေပါလျှင် သင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းပယ်ဤဦးတည်ရာကို tick သားအပေါင်းတို့သည်ကိုတွေ့မြင် ဥရောပအကောင်းဆုံးသောနေရာများ, သငျသညျချင်လိမ့်မယ် တတ်နိုင်သမျှအမှတ်ရစရာအဖြစ်အတွေ့အကြုံအောင်. So pay attention to how to Train Travel in Europe with Thalys.
မီးရထားခရီးသွားလာဥရောပတိုက်တွင်အပန်းဖြေအများကြီးညှစ်ဖို့ savviest နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. Thalys သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအန္တရယ်မဖြစ်စေဘဲစတိုင်နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်သောမြို့ကြီးများအားလုံးသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။.
အဆိုပါနာမည်ကြီး "အနီရောင်ရထား" ကိုသိရယူပါ
Thalys နှင့်အတူဥရောပ၌အခါသင်ရထားခရီးသွား, အဆိုပါရထားက၎င်း၏အင်ဂျင်များ၏တက်ကြွအနီရောင်အရောင်အတွက် "အဆိုပါအနီရထား" အဖြစ်လူသိများကြသည်, မင်းကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းပါ 17 တစ်လွှားမြို့ကြီးများ အနောက်ဥရောပ နှစ်သိမ့်အတွက်. အဆိုပါ Thalys လိုင်းအဘိဓါန်ပွငျသစျဘယ်လ်ဂျီယံမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများဖွဲ့စည်းထားသည်, အဆိုပါ HSL မှတဆင့်အမ်စတာဒမ််ထမ်းဆောင်. ဘရပ်ဆဲလ်မျဉ်းများအတွက်အချက်အချာအဖြစ်အမှုဆောင်နှင့်အတူ, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောပဲရစ်အဖြစ်ဥရောပတွင်အဓိကမြို့ကြီးများသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, Liege, အမ်စတာဒမ်, Antwerp, Cologne, နှင့် အဆိုပါဟိဂ်.
ဤ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား ၏အမြန်နှုန်းမှာခရီးသွား 300 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ. ရထားလိုင်းကိုလျှို့ဝှက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဘရပ်ဆဲလ်ကနေသွားပါ တစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲအောက်မှာအတွက်ပဲရစ်. ထိုအသင်သာအတွက်အမ်စတာဒမ်မှပဲရစ်မြို့ကနေလမ်းအပေါင်းတို့ရွှေ့နိုင်ပါတယ်3နာရီနှင့် 20 ငါ့ကို! အဆိုပါ Thalys ထက်ပိုစေသည် 50 ပတ်ပတ်လည် ရထားခရီးစဉ်များ နေ့ရက်တိုင်း. ရှိပါတယ် 27 အဆိုပါအပြေးတစ်ရက်လေ့ ပဲရစ် - တစ်ဦးတည်းဘရပ်ဆဲလ်လမ်းကြောင်း.
မှန်ကန်စွာရွေးချယ် Class ကိုရွေးချယ်ခြင်း
စံတော်ချိန် - သူတို့က Thalys နှင့်အတူဥရောပ၌အခါသင်ရထားခရီးသွားများထံမှရွေးချယ်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုသုံးခုအတန်းရှိ, သက်သာခြင်း, နှင့်ပရီမီယံ.
နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ပရီမီယံအတန်းနှစ်ဦးစလုံးသငျသညျကိုခံစားနိုင်မည့် "1st လူတန်းစား" ထိုင်ခုံပူဇော် မီးရထားခရီးသွားလာ ပိုပြီး legroom ပေးပျူငှါနွေးထွေးသောလျောင်းထိုင်ခုံ၏နှစ်သိမ့်အတွက်. ပရီမီယံရွေးချယ်ရာတွင်များ၏အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရထားရဲ့ဝန်ထမ်းသင့်ရဲ့အစေခံသောကွောငျ့ဖွစျသညျ အစားအသောက် နှင့်သင့်ထိုင်ခုံမှာအချိုရည်. သင်တို့သည်လည်းပဲရစ်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ Thalys နားနေခန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်.
နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ပရီမီယံထဲမှာထိုင်ခုံတစ်ဦးအတွက်စီစဉ်ပေးထားပါသည်2+ 1 ပုံစံ. အသီးအသီး Cabin အပေါ်, သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျ 1 စားပွဲပေါ်မှာထိုင်လျက်, စုံတွဲများခရီးသွားလာထိုသို့စုံလင်သောအောင်. စံသို့မဟုတ် "2nd လူတန်းစား" ထိုင်ခုံတစ်ဦးတွင်ရှိ2+2ကားကိုဖြတ်ပြီးပုံစံ.
အားလုံးအတန်း onboard Wi-Fi အင်တာနက်ပူဇော်, ဘားဘူဖေးမှဝင်ရောက်ခွင့်, နှင့်သင်၏သီးသန့်ပါဝါ socket သင့်ရဲ့ device များအတွက် plugging.
သင် Thalys ရထားပေါ်တွင်သွားလာလိုလျှင်၎င်းသည်ရထားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်မသင်မနေရင်. The Thalys trains are high demands so make sure you book your train ticket as much as possible in advance.
သငျသညျအထိ Thalys ပေါ်တွင်သင်၏ထိုင်ခုံကြိုတင်ယူထားနိုင်ပါတယ် 90 ကြိုတင်မဲအတွက်ရက်ပေါင်း. ထိုအလျှင်သင် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်အစောပိုင်းဘွတ်ကင်လုပ်ရန်, သငျသညျအထိကိုကယျတငျနိုငျ 75%!
To make reservations to Train Travel in Europe with Thalys, စာအုပ်တစ်ဦးကရထားအွန်လိုင်း. အကြှနျုပျတို့သညျမဆိုဘွတ်ကင်အခကြေးငွေစွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုနှုန်းထားများမရင့်ကိုသေချာစေရန် Thalys နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-europe-thalys%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#traveleurope europetravel trainjourney Tranride ရထား traintip ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား travelbelgium travelfrance travelgermany ခရီးသွား netရာဝတီ traveltips